Nectarines ezihlukahlukene ekhethekile peach. It has emangalisa iphunga evelele, okuyinto usibeka wodwana izithelo. Ngo izingadi yasekhaya lapho cishe engakhuli ngenxa nesimo sezulu esibandayo, kodwa ujamu nectarine ku ebusika ufisa ukupheka cishe njalo wekhaya, ngoba kungaba kubhekwe uju yangempela. Yingakho peach enjalo ngokuvamile ukuthenga, naphezu intengo kunalokho okusezingeni eliphezulu.
Futhi uzinake yinkulumo ekhethekile kulesi sithelo, okwenza kuye inani elihle kunawo ngokwenza ujamu. Ihlala ngokungabi bikho ephelele izinwele esikhumbeni, okuyinto ukuletha okungalungile ukucutshungulwa nezinye amapentshisi. Kulokhu, nectarine ujamu ulamula vanilla ngempela ngokungafani nezinye izithelo ezenziwe ekhaya futhi kahle zokuhamba njengoba ukugcwaliswa ngoba namakhekhe.
- nectarine - 1 kg;
- ushukela - 2 izinkomishi;
Iziyalezo eziningi ezixoxa indlela ukupheka ujamu nectarines ukunikela ukukhetha izithelo ezivuthiwe, kodwa eliqinile. Ngakho uthole ukuthungwa ezilungile izingcezu ezincane, kunokuba mass homogeneous, njengoba kwenzeka amapentshisi overripe. Ngakho-ke, izithelo kumele zihlukaniswe amathambo bese uthathe cubes. Ikhasi ngaleyo ndlela asikho isidingo ukudubula.
Ukuze silungiselele kahle nectarine ujamu ebusika, kudingeka uthole ijusi ngaphandle kokubhubhisa isakhiwo izingcezu. Ukuze wenze lokhu, kufanele ugcwalise izithelo lisikiwe ushukela bese efakwa efrijini. Kumele kube khona izinsuku ezintathu.
Lapho isikhathi esabelwe sesiphumile, izithelo ibekwe epanini, engeza vanilla kalamula. Ngemva kwalokho-ke wagqoka umlilo futhi imenze ngamathumba. Khona-ke yenzani umlilo kancane kancane bese upheka izithelo imizuzu amabili. Ukuzimisela kufanele ihlolwe by bit peach. Uma ziba okusobala, kungaba kubhekwe ukuminyana nectarine olungiselwe ubusika.
Phakathi ukupheka, udinga abilayo izimbiza. Kuyodingeka uthele le jam okuphekiwe, siqiniseke ukuthi isimumathi ngasinye wawa esilinganayo nezithelo isiraphu. Kwathi lapho ibhange ligcwele, it is eneziqongo futhi nabokhulumile ukudala ukubekwa uphawu ezengeziwe. Kulesi sikhundla, ukubeka endaweni emnyama futhi efudumele ukufeza Ukupholisa iyunifomu. Ngemva kwalokho, nectarine ujamu ebusika kubhekwa ngomumo. It is adluliselwe ku endaweni emnyama futhi cool lapho uyokuma ukuyisebenzisa.
Isitoreji kanye nokusetshenziswa
Egcinwe ukuminyana kungaba iminyaka ethi ayibe mithathu. Nokho, unikezwa ukunambitheka kwalo zinkulu, akuvamile baphile ngokuvumelana nalokho ibhange kulesi sikhathi. Lo mkhiqizo isetshenziswa ibhekwa itiye isibindi njengoba. Futhi ujamu ingasetshenziswa womshini ahlukahlukene namakhekhe. Peach ihlangana kahle kunjalo nganoma ikuphi ukuhlolwa futhi kuyoba umphelelisi ephelele eya ikhekhe noma amakhekhe.
Nokia 301 Dual Sim: ukubuyekezwa. Umakhalekhukhwini Nokia 301 Dual Sim
Amakhambi Provencal. Ukwelapha izindawo izinongo